यी हुन् विश्वका धनी पोर्नस्टार, कसको सम्पत्ति कति ? - Hamro Kalam
Home Bannernews यी हुन् विश्वका धनी पोर्नस्टार, कसको सम्पत्ति कति ?
यी हुन् विश्वका धनी पोर्नस्टार, कसको सम्पत्ति कति ?
यौन व्यवसाय त्यस्तो व्यवसाय हो जहाँ पुरुषको भन्दा महिलाको कमाई धेरै हुन्छ । यौन व्यवसायको प्रायजसो उपभोक्ता पुरुष नै हुन्छन् । यौन व्यवसाय गर्ने महिलाहरुको कमाई १ हजारदेखी २ हजार डलर प्रति सीन हुन्छ । तर कुनै समयमा यो रकम बढेर ६ हजार डलर प्रतिसीन समेत पुग्छ ।
हेर्नुहोस् सबैभन्दा धनी पोर्नस्टार र उनीहरूको सम्पतिः
निक्की बेंस-सम्पति १० लाख डलर
युक्रेन र क्यानडादेखि प्रभाव राख्ने यी पोर्न स्टारसँग १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पति रहेको छ । २०१० मा यी ‘पेंटहाउस पेट’ रहेकी थिइन् र गएको वर्ष यिनी ‘पेट अफ द इयर’मा छानिएकी थिइन् । निक्की बेंसले मे २०११ मा क्यानडाको राजधानी टोरन्टोमा मेयर पदको पर्चा भरेको थियो । तर पछि फिर्ता लिएकी थिइन् ।
आसा अकीरा-सम्पति १५ लाख डलर
जापानी अमेरिकी पोर्न स्टार आसाले आफ्नो जीवनको सुरुवात एक स्ट्रपरको रुपबाट गरेकी हुन् । तर आजभोली उनी एसियन देशहरुका ठुला पोर्नस्टार मध्ये एक हुन् । उनको सम्पति लगभग १६ करोड रुपैयाँ पुगिसेको छ ।
लिसा एन-सम्पति २० लाख डलर
लिसा एनले बिहाइण्ड द क्यामरा रोल र केम अप रोल्सको लागि पनि योग्य मानिने एक हुन् । उनले आफ्नो नयाँ कम्पनि पनि खोलेकी छन् । उनीसँग लगभग २२ करोड रुपैयाँको सम्पति रहेकको छ ।
सनी लियोन-कुल सम्पति २५ लाख करोड
सनी लियोनलाई नचिन्ने त कमै होलान् । उनी अब आफ्ना उत्पादक पति डेनियल र आफ्नै पनि उत्पादन कम्पनि सनलस्ट बनाइसकेकी छिन् । उनको कुल सम्पति २६ करोड रुपैयाँको आसपास रहेको छ ।
साशा ग्रे-कुल सम्पति ३० लाख डलर
आफूलाई १४ वर्षको उमेरमा नै पोर्नस्टारको क्षेत्रमा कदम चलाउने साशा ग्रेले २१ वर्षको उमेरमा यसलाई त्यागिन् र मुख्य धाराको फिल्म तर्फ मुड घुम्यो । उनको पहिलो फिचर पिल्म ‘द गर्लफ्रेण्ड एक्सपेरियनस’ ले धेरै साराहाना पायो । उनीसँग करिब २० करोड रुपैयाँको सम्पति रहेको छ ।
जेना हेज-सम्पति ३७ लाख डलर
फेब्ररी १९८२ मा जन्मेकी जेना हेज अमेरिकी डाइरेक्टर मडर र पूर्व पोर्नस्टारले अडल्ट इन्डस्ट्रीका धेरै अवार्ड्स जितेकी छन् । अहिले उनीसँग करिब करिब ४० करोड रुपैयाँको सम्पति रहेको छ ।
ब्री आल्सन-सम्पति ५० लाख डलर
आल्सनको केही समयका लागि चार्ली सीनसँग सम्बन्ध रह्यो । पोर्न फिल्म बाहेक उनले सेक्ट टायजबाट पनि उनले रुपैयाँ कमाइन् । उनीसँग अहिले लगभग ५३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सम्पति रहेको छ ।
जेसी जेन-सम्पति ८० लाख डलर
पोर्न स्टनर जेसी जेन लेखिका, प्ले ब्वाई टीभीकी हस्ट त हुन नै । उनले रक्सीको एक ब्राण्ड पनि सुरु गरेकी छन् । उनको सम्पति ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको रहेको छ ।
टेरा प्याट्रिक-सम्पति १ करोड ५० लाख डलर
प्याट्रिकले आफ्नो युवा जीवन १९९९ देखि सुरु गरिन् र उनले २००३ मा ‘विविड’बाट उत्पादन सुरु गरिन् । २००८ मा उनले पोर्न इन्डस्ट्रीको लागि फिल्म शुट गर्न बन्द गरिन् । तर वेबसाइट र उत्पादन कम्पनि चलिरहेको छ । उनीसँग लगभग डेढ अर्ब रुपैयाँको सम्पति रहेको छ ।
जेना जेमसन-सम्पति ३ करोड डलर
स्ट्रपर र ग्लेमर मोडेलको रुपमा काम गरेपछि जेमसनले १९९३ मा उत्तेजक भिडियोमा काम गर्न सुरु गरिन् । सन २००० मा उनले एडल्ट इन्टरटेनमेन्ट कम्पनि क्लब स्थापित गरिन् । उनलाई पोर्न क्वीन पनि भनिन्छ । २००८को एवीएन अवार्डस पाएपछि उनले उक्त पोर्न इन्डस्ट्रबाट राजीनामा गरिन् । फेरि उनी २०१३ देखि वेबक्याम मोडेलको रुपमा प्रदर्शन गरिरहेकी छन् । उनको कुल सम्पति ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ ।
मध्यपूर्वको युद्ध उत्तेजना मत्थर हुनु तेस्रो पक्षका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा
प्रदेश तीनको नाम वागमती र राजधानी हेटौंडा